Isaladi lezinkukhu zakudala - Ungadliwa
okudliwayo nge-hash brown casserole
ukugcwalisa emapulazini e-crockpot
okuhamba kahle ngemifino ye-collard
lapho ungathola khona ukuhlanganiswa kwekhekhe lefaneli
zithini izithako zokuthosa izinkukhu ze-mccormick?
Isaladi lezinkukhu zakudala
Kuwo wonke amasaladi asehlobo, a isaladi yenkukhu yakudala iresiphi ihlale iyintandokazi epikinikini, esosoji, noma esiphundu sehhovisi! Izithako ezimbalwa nje zingaguqulwa zibe isaladi ebandayo, enokhilimu noma yokugcwalisa isangweji lenkukhu elenziwe ekhaya noma ukugoqa!
Gcina le iresiphi elula ezandleni ze-sandwich prep ngomzuzu wokugcina lapho kufika izimemo zemizuzu yokugcina! Khonza leli hlobo ngohlangothi lwe Isaladi le-pasta lase-Italy futhi ezinamahloni Ummbila othosiwe kusikhwebu !
Izithako ku-Chicken Salad
Sebenzisa okusele kusihlwa sakusihlwa sangokuhlwa noma inkukhu yokubola esalile noma inkukhu eyosiwe.
Ukwenza Inkukhu ngesaladi lenkukhu Ngithanda ukusebenzisa noma iyiphi inkukhu eboshiwe noma amabele enkukhu abhakiwe noma amathanga .
Ungasebenzisa inkukhu ekheniwe ku-pinch kepha impela okusha kungcono kakhulu lapho kunokwenzeka.
Qinisekisa ukuthi inkukhu ipholile futhi igawuliwe noma usike inkukhu ibe yizicucu ezilumayo.
Njengoba lena iresiphi yesaladi yenkukhu yakudala, ngigcine izengezo zincane. Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi sokuwa, u-anyanisi oluhlaza ngokunambitheka.
Le recipe ingenziwa ngamantongomane ahlukahlukene, imifino, nezithelo zokunambitheka okwengeziwe nokuthungwa.
Inkukhu isaladi enamagilebhisi, ukwatapheya noma ama-cranberries omisiwe iyintandokazi. AmaPecans noma ama-alimondi ahlangana kahle nale recipe.
Imayonnaise iyisisekelo salesi iresiphi futhi isongwe nje.
Ungathola ubuciko futhi ufake enye ye-mayo ye- ukugqoka ipulazi noma iresiphi yakho yokugqoka isaladi oyithandayo.
Dala ifayela le- Isaladi lezinkukhu zikakotapheya ngokufaka enye yemayonnaise nge-avocado ecubuziwe.
Ungasenza Kanjani Isaladi Lezinkukhu?
Lungisa isaladi yenkukhu yakudala ngemizuzu engu-15 ngezithako ezimbalwa ezilula.
Qoba inkukhu ephekiwe nesehlile bese ufaka endishini enkulu enesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi no-anyanisi.
Hlanganisa izithako zokugqoka (iresiphi ngayinye ngezansi) endishini. Phosa ngenkukhu.
Khonza kumaroli, isinkwa noma ngaphezulu kobuhlalu be ulethisi.
Kule iresiphi yesangweji lesaladi lenkukhu, noma yisiphi isinkwa esizokwenza, izingcezu eziwugqinsi zebaguette noma amabhanisi / imiqulu zibambe kahle. Le yi-carb ephansi ngokwemvelo futhi yinhle ngaphezu kwe-a isaladi elilahliwe kanjalo.
inkukhu casserole enezitofu phezulu ukugxusha kanye nemifino
ISIQINISEKISO: Esitsheni esingena moya, isaladi lenkukhu lizohlala cishe isonto esiqandisini. Yivuse futhi uvuselele ukunambitheka ngosawoti omncane nopelepele (noma unodoli owengeziwe wesinaphi se-Dijon) bese ukhonza!
ISIMALI SAMAHHALA: Isaladi lenkukhu alibandi kahle. Ukuze ulungiselele phambili, mane udayise inkukhu bese uqeda. Uma usulungele ukwenza, hlanganisa nezithako ezingezansi ukuze uthole isidlo sasemini esisheshayo!
Kumelwe uzame amaSandwich
Uphayinaphu Inkukhu Isaladi Ngamagilebhisi - intandokazi ehlobo entsha
Khipha ku-internet Egg isaladi Recipe - All-American zakudala!
Ukugoqwa Kwesaladi Le-Avocado Ranch - ilayishwe ukunambitheka
Isaladi le-Bacon Ranch Chicken - okumnandi okusha futhi okumnandi!
Isaladi le-Tuna yakudala - ngomumo ngemizuzu engu-10!
Isaladi leShrimp - ukungena okuhle kokukhanya
Isikhathi sokulungiselelaishumi nanhlanu imizuzu Isikhathi Esipheleleishumi nanhlanu imizuzu Izinkonzo6 izinsizakalo UmbhaliUHolly Nilsson Iresiphi yesaladi yenkukhu yakudala ihlale iyintandokazi epikinikini, esosweni noma esiphundu sehhovisi! Izithako ezimbalwa nje zingaguqulwa zibe isaladi ebandayo, enokhilimu noma yokugcwalisa isangweji lenkukhu elenziwe ekhaya noma ukugoqa! Phrinta Phina
▢ezimbili izinkomishi inkukhu ephekiwe oqoshiwe
▢½ inkomishi imayonnaise
▢1 isiqu isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi oqoshiwe
▢1 u-anyanisi oluhlaza okuqoshiwe (noma ama-chives noma anyanisi obomvu)
▢1 isipuni UDijon Mustard
▢½ isipuni usawoti omisiwe
▢1 isipuni idile entsha ongakukhetha
ipani yokuwosa nge-rack nesembozo
Hlanganisa zonke izithako esitsheni esincane uhlanganise kahle.
Isizini ngosawoti kanye nopelepele ukunambitha.
Khonza njenge sandwich noma ngaphezulu kwesaladi.
Amakholori:206,Amakhabhohayidrethi:1g,Amaprotheni:ishumi nanhlanug,Amafutha:16g,Amafutha agcwalisiwe:3g,Cholesterol:48mg,I-Sodium:362mg,Potassium:137mg,Umucu:1g,Ushukela:1g,Uvithamini A:72IU,Uvithamini C:1mg,I-calcium:10mg,Insimbi:1mg
Igama elingukhiyeinkukhu isaladi InkamboIsaladi KuphekiweWaseMelika© SpendWithPennies.com. Okuqukethwe nezithombe kuvikelwe i-copyright. Ukwabelana ngale recipe kuyakhuthazwa futhi kuyaziswa. Ukukopisha kanye / noma ukunamathisela izindlela zokupheka ezigcwele kunoma iyiphi imithombo yezokuxhumana akuvunyelwe nakancane. Sicela ubuke inqubomgomo yami yokusebenzisa izithombe lapha .